Ilizwe laseTuscan-Alto Mugello - I-Airbnb
Ilizwe laseTuscan-Alto Mugello
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguFosco
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uFosco iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yam iseFirenzuola, idolophana yamaxesha aphakathi kumaphandle aseFlorence, yaye ijikelezwe ngamasimi. Indlu ibekwe kumgangatho wokuqala kwaye ineloggia enkulu apho ungahlala khona kwaye ube nesidlo sasemini / isidlo sangokuhlwa. Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukupheka.
Igumbi lokuhlala linendawo yomlilo apho unokwenza iinkuni ngeenkuni ezifumaneka kwiindwendwe.
4.32 out of 5 stars from 124 reviews
4.32 · Izimvo eziyi-124
Idolophana yaseFirenzuola incinci kwaye ivalwe ngeendonga ezikhuselayo zenkulungwane yeshumi elinesine ibonakala kwiindawo ezininzi. Isityalo sinomdla kakhulu kuba sibonisa iinkampu zaseRoma yamandulo (i-Castrum), kwaye indlela ephambili iphelele ngee-porticos.
Kwisikwere esisembindini inqaba ngoku yiHolo yeDolophu, ngelixa icawa yaseSan Giovanni Battista ingumsebenzi womzobi odumileyo wale mihla, uCarlo Scarpa.
Kude kufuphi nendlu kukho indawo yezemidlalo yaseFirenzuola, enenkundla yentenetya, ibhola ekhatywayo kunye nedama lokuqubha.
Ukuthenga, kufutshane nekhaya kukho ivenkile encinci egcwele kakuhle. Zininzi izinto zokwenza e-Firenzuola, ezemidlalo, utyelelo kunye nohambo, kwaye kusoloko kuluyolo ukunika iindwendwe iingcebiso malunga nokuba wenze ntoni okanye ubone ntoni okanye ungcamle phi isidlo esikhethekileyo sendawo esibizwa ngokuba yiTortelli di Patate.
Umbuki zindwendwe ngu- Fosco